ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခဖြေရှင်းနည်း(သို.)တရားဥပဒေစိုးမိုးေ၇းနှင့်လူနည်းစုအပေါ် လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းကိုတည့်တည့်ကြည့်ခြင်း (ဒုတိယပိုင်း) | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခဖြေရှင်းနည်း(သို.)တရားဥပဒေစိုးမိုးေ၇းနှင့်လူနည်းစုအပေါ် လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းကိုတည့်တည့်ကြည့်ခြင်း (ဒုတိယပိုင်း)
Min Thein‘s photo.
ဘင်္ဂါလီ(ခေါ်)ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးရေးခွဲခြားစိတ်သည်ထိုလူမျိုး၏ဘာသာရေးဖြစ်သောအစ္စလာမ်ဘာသာ(သို.)မွတ်စလင်ဟုခေါ်သော၎င်း ဘာသာဝင် များကိုခွဲခြားလိုသည့်စိတ်နှင့်တွဲပါနေသည်။ ဘင်္ဂါလီမွတ်သလင်ဆိုကာထိုလူမျိုးစုကို ဘာသာနှင့်တွဲမြင်အောင်သုံ ခြင်း၊ ဘင်္ဂါလီခေါ်ရိုဟင်ဂျာများနောက် တွင် ထောက်ပံသူမွတ်စလင် များရှိ သည်၊ မွတ်စလင် အကြမ်းဖက် သ္မားများနှင့်ပတ်သက်သည် စသဖြင့်အတင်းဆက် စပ်ပြကြခြင်း၊ (မည်သည့်အကြမ်းဖက်တိုက် ဖျက်ရေး အ ဖွဲ.ကမှ သက်သေမပြကြသေးပါ)၊ မွတ်စလင်ဆိုင်များကိုအားမပေးရန် စည်းရုံးကြခြင်း များကိုကြည့်လျှင် လူမျိုးရေးရောဘာသာရေး ပါမုန်း တီးစိတ်ရှိကြောင်းသိနိုင်သည်။ ထို.ကြောင့် လူမျိုးရေး ဘာသာရေးခွဲခြားစိတ် မရှိအောင်၊ တနည်း အားဖြင့် မိမိနှင့်ဘာသာ၊လူမျိုးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု မတူသူများ ကိုနှိမ့်ချလိုစိတ်၊နှိက် စက်လိုစိတ်၊သတ်ဖြစ်လိုစိတ်မရှိအောင် အားလုံးဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်း ရပါမည်။
ထိုသို.ကြိုးပမ်း ရာတွင် ဘင်္ဂါလီ(ခ)ရိုဟင်၈ျာလူမျိုးစုတစ်စုရှိ နေခြင်း ကိုပြသနာဟု ရှုမြင်စေသော အကြောင်း များ ကိုနားလည်သင့်ကြပါသည်။ထိုရှိနေသည့်လူမျိုး စုကိုပြသနာဟုမြင်စေသောကြား သိသမျှ အကြောင်းများမှာ၊(၁) ၎င်းလူမျိုးစုသည်နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ခွဲထွက်ရန်အားထုတ်ခဲ့ကြဖူး သည်။ယခုထိလည်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက် ရန်ကြိုးစားနေသည်။ ထို.ပြင်လူဦးရေတိုးအောင် လည်း အား ထုတ်ကာ လူမျိုးစုကို သိမ်းပိုက်ရန်ကြိုးစားနေသည်။(၂) ၎င်းလူမျိုးစုသည် လူများစုကိုယ်း ကွယ်သော ဘာသာနှင့်အစစဆန်.ကျင်သောဘာသာကို ကိုယ်းကွယ်ကြသူများဖြစ် သည်။(၃) ၎င်းလူမျိုးစုသည်တိုင်းရင်းသား မဖြစ်နိုင်ထို.ကြောင့်ဘာ အခွင့်အရေးမျှမရနိုင်။
ပထမအကြောင်းဖြစ်သောထိုလူမျိုးစုသည်နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ခွဲထွက်ရန်ကြိုးစားနေကြသည်ဆိုသည်ကိုယခုအဖြစ်အပျက်များကသက်သေမပြနိုင်ကြပါ။ မိမိအိမ်ကိုမိမိမီးရှိုးကာခွဲထွက်ရန်ကြိုးစားနေကြ သည်ဟုယုံပါက လပေါ်မှာယုန်ရှိသည်ကိုယုံ သလို ပင်ဖြစ်နေပါ လိမ့်မည်။ ထိုလူမျိုးစုသည်လူဦးရေတိုးရန်အားထုတ်သည်ဆိုသည်မှာ ကလေး အမွေးများ သည်ကိုဆိုလိုသည်။အမှန်တကယ်၌ စစ်တပ်တစ်ပိုင်း အစိုးရ၏ကျန်းမာေ၇း စီမံကိန်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။သားကြောဖြတ် ရန်ကန်.သတ်မှုများ၊ပညာရေးနိမ့် ကျမှုများ၊ကျမ်း မာရေးစောင့်ရှောက်မှုချို.ယွင်းချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။
လူဦးရေတိုးပွားအောင်လုပ်ကာလူမျိုးပြုတ်အောင်ဝါးမျိုမည်ဟု ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းလူမျိုးစုသည် လူများစုထဲက အမျိုးသမီးများကိုလက်ထပ်၊ကလေးမွေးကာ မွေးလာသည့်ကလေးများကိုသူတို. ဘာသာ ၀င်ဖြစ်အောင်လုပ်မည်နောက်ဆုံးလူများစု အားလုံးတခြားဘာသာဝင်ဖြစ်စေရမည်ဟု ဆိုလိုသည်။ဤသည်မျာလည်းယုတ္တိမတန်သောကြံဆချက်များသာဖြစ်သည်။ဤယုတ္တိကိုမှန်သည်ဟုယူဆလျှင်တောင် လူများစုကသာလူနည်းစုကိုလွှမ်းမိုးဖို.ရှိ၍ လူနည်းစုကသာ၎င်းတို.ဘာသာအတွက်စိုးရိမ်ရပေမည်။
ဤကဲ့သို.အကြံ မျိုးဘာကြောင့်ပေါ်လာသလဲ ဘာတွေကိုအခြေခံသလဲဆိုသည် မှာစိတ်ဝင် စား ဖို.ကောင်း သည်။ ဗိုလ်ကျအနိုင်ကျင့်သူသည်မိမိဗိုလ်ကျ သည့်သူကိုမည်မျှပင် အားနည်း ပါစေအားနည်းသည် ဟုဘယ်တော့မှမပြောတတ်ကြပါ။မမြင်တတ်ကြပါ။မိမိနှင့်အားတူ(သို.)အားသာသည့်အဆင့်ထိမြင်အောင်တွေးယူကာ မိမိ၏ဗိုလ်ကျမှုကို တ၇ားအောင်၊ယုတ္တိကျအောင်လုပ်တတ်ကြပါသည်။ ယ္ခု ကိစ္စတွင် လည်း ရိုဟင်ဂျာ(ခ) ဘင်္ဂါလီများကို အားကြီးသူရန်သူဟုမြင်စေရန် လူတိုင်း၏ဘ၀င် အခိုက်ဆုံးသော အရာများဖြစ်သည့်အိမ်ထောင်မှုထူထောင်ခြင်းနှင့် ဘာသာရေးခံယူချက်များကိုသုံးပြီးခြောက် ထား ရ ပါ သည်။ထို့ကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စတွင်အကုန်တူမှ နောက်ဆုံးသွေးတူမှ (အမျိုးတော်မှ) ဆိုကာ၊ တ၀မ်းကွဲ၊ဖအေတူ မအေကွဲ၊(ဘုရင်ကမိန်းမ အများကြီး ယူသောကြောင့်) မောင်နှမချင်းထိပေးစား တတ်ကြသည်မှာ ပဒေသရာဇ်ခေတ်ကအလေ့ အကျင့် ပင်ဖြစ်သည်။
ဒုတိယအကြောင်းဖြစ်သောဘာသာမတူခြင်းသည်လည်း ပြသနာမဟုတ်ပါ။ဘာသာမတူသူများအချင်းချင်းယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြသောနေရာ နှင့်နိုင်ငံအသီးသီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပါ။ဘာသာရေး ကိုအခြေခံ ၍ရန်ဖြစ်နေကြသောနိုင်ငံများ ကိုလည်းလှမ်းကြည့်လိုက်ပါ။မိမိဘာသာကြီးပွားခြင်းသည်မိမိ၏လူသားဆန်စိတ်မည်မျှရှိသည်မရှိသည်ပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။ အခြားဘာသာတစ်ခုကြီးပွားမှု မကြီးပွား မှုပေါ်တွင် မမူတည်ပါ။ဘာသာရေး သဘောတရား အမျိုးမျိုး ကိုကိုယ်း ကွယ်သူအသီးသီးကနားလည်ခံယူပုံကွဲကြပါသည်။ဘာသာတစ်ခုတွင်းမှာပင် ခံယူ ကျင့်ကြံပုံ မတူ ကြပါ။ မိမိခံယူပုံနှင့် မတူ သောကြောင့်၊ မိမိဘာသာနှင့် မတူသောကြောင့် သာပြသနာဟုမြင်ကြလျှင် အမုန်းပွားဖို.ပင်ရှိ ပါသည်။
(နောက်ဆုံး အပိုင်းကို ဆက်လက်တင်ပေးပါမည်။)
This entry was posted on December 9, 2012, in နိုင်ငံရေး. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← မိုဘိုင်းဖုန်းတစ်လုံး၏ လျှို့ဝှက်ချက်ငါးခု
ကုရ်အာန်က ကမ္ဘာပြားသည်ဟု ပြောထားပါသလား? →